Falanqaynta Kulanka Xiisaha Leh Ee Tottenham Vs Liverpool
Garoonka: White Hart Line, London
Waqtiga: 13:30 GMT ama 3:00 PM Saacada Geeska Afrika
Wuxuu kulan xiiso badani dhex maridoonaa kooxaha Tottenham iyo Liverpool, iyadoo Tottenham gurigeeda White Hart Line ku soo dhawayndoonto kooxda Reds.Labadan kooxood ayaa iska horyimid 142 oo kulan, Tottenham ayaa badisay 41 kulan, halka ay kooxda Liverpool guulaysatay 66 kulan,waxayna barbaro galeen 35 kulan.
Liverpool ayaa soo dhawn doonta saxiixooda cusub ee Mario Balotelli oo la filaayo inuu kulankisii kowaad liverpool u ciyaaro.Balotelli ayaa dib ugu soo laabtay horyaalka ingiriiska wuxuuna qirtay inuu qalad sameeyay inuu dib ugu laabtay horyaalka Talyaaniga. 24 jirkan ayaa intii uu joogay Milan udhaliyay 26 gool, 43 kulan oo uu ciyaaray. Wuxuuna Rodgers aad ugu baahan yahay in Balotelli uu weerarkiisa xoojin wayn u sameeyo. Balotelli ayaa goolka guusha u dhaliyay kooxda Man City kulankii ugu danbeeyay ee uu ka horyimaado Tottenham.
Mar uu jimcihii Rodgers ka hadlay xaalka Balotelli ayuu yidhi: “Mario wuu fiican yahay, si fiican ayuu markiiba u dagay, wuxuuna tababarka u qaatay si layaableh waana ciyaartoy fiican”.
Spurs ayaa xili ciyaareedka ku bilabatay qaab ciyaareed fiican iyadoo tababarahooda cusub ee Mauricio Pochettino uu u muuqdo inuu wax wayn ka badalay kooxda Tottenham. Tottenham ayaa guulo ka soo gaadhay kooxaha West Ham iyo QPR, waxayna soo gaadhay Europa Leaquega heer ka groupyada.
Liverpool ayaa xili ciyaareedkii hore Tottenham ka dhalisay 9 gool labdii kulan iyadoo lixda dhibcoodna ka qaadatay. Guuldaradii 5:0 ka ahayd ee liverpool White Hart Line kaga soo badisay Tottenham ayaa keentay in shaqadii lagaga caydhiyo tababare Andre Villas-Boas.
Pochettino oo kulankan ka hadlaya ayaa yidhi: “Kani waa xili ciyaareed cusub, waxayna kooxdu ku ciyaaraysaa qaab ciyaareed ka duwan kii hore iyo waliba aragti ka duwan tii hore. Waan aaminsanahay kooxdayada waxaananu ku soo darnay ciyaartoy dheeli tira”.
Tottenham ayay ka maqnaandoonaan Kyle Walker iyo Roberto Soldado oo dhaawac ku maqan, waxaana laga yaabaa in saxiixa cusub ee Federico Fazio uu safandoono kulanka Liverpool.
Dhica Liverpool Rodgers ayaa la filayaa inuu kulankiisii kowaad oo tartan ah uu safo Adam Lallana oo ka mid ahaa ciyaartoydii uu Pochettino tababaraha ugu ahaa Southamton.Lallana ayaa ka soo laabtay dhaawac uu ku maqnaa. Alberton Moreno, Glen Johnson iyo Jose Enrique ayuu shaki ku jiraa inay safan karaan kulankan Spurs.
Line-upyda ay Suurto galka tahay inay labada kooxooda ku soo kala gali karaan:
Deg-Deg: Bayern Munch Oo Ku Dhawaaqday Inay Heshiis Lagaadhay Xavi Alonso
Bayern Munich ayaa ku dhawaaqday inay heshiis la gaadhay xidiga khadka dhexe ee kooxda Real Madrid ee Xavi Alonso. Real Madrid iyo Bayern Munich ayaa ka heshiiyay iibka Alonso. Alonso ayaa maanta oo khamiis ah u safraaya Jarmalka si uu tijaabada caafimaadka ugu maro kooxda Bayern Munich. Alonso ayaa shalay ku dhawaaqay inuu ka fadhiistay ciyaaraha caalamiga ah.
Bayern Munich ayaa doonaysa inay dhexdeed xoojiso waxayna doonayaan in Alonso buuxiyo booska uu ka dhaawacmay Javi Martinez oo garoomada muddo dheer ka maqnaandoona.
Jan-Christian Dreesen oo ah xubin ka tirsan boodhka Bayern Munich oo arintan ka hadlay ayaa yidhi: “waa sax inaanu wada xaajoodyo kula jirnay kooxda Real Madrid, waxaananu ka doonanay Xavi Alonso. Waxaanu Real Madrid isla gaadhnay heshiis ku aadan iibka Alonso. Ciyaaroyga ayaa maanta oo khamiis ah xili danbe soo gaadhi doona Munich si uu tijaabada caafimaadka noogu maro”.
Fernando Torres Oo AC Milan Amaah Ugu Wareegaya Iyo Van Ginkel Oo Chelsea Iska Sii Joogidoona
Kooxda AC Milan oo ka doonaysay kooxda Chelsea Fernando Torres Iyo Van Ginkel ayay hadda u muuqataa in Torres amaah ugu biiridoono halka Van Ginkel uu sii joogidoono kooxdiisa Chelsea.
Labada kooxood ee Chelsea iyo Milan iyo waliba Fernando Torres ayaa hadda doonaya inay ka heshiiyaan mushaarkiisa. Torres oo ay da’diisu tahay 30 sano jir ayaa heshiiskiisa uu Chelsea kula jiro waxaa ka hadhay laba sanadood kaas oo ku kacaaya £9million oo gini sandkiiba. Balse Milan ayaa doonaysa inay £7million siiso Torres, waxayna Torres ku qaadanaysaa hal xili ciyaareed oo amaah ah.
Jose Mourinho ayaa doonaya inuu culays saaro ciyaartoygan kooxda ku taagan £50m. Chelsea ayaan doonayn inay bixiyaan £2m ee ka hadhsan mushaarka Torres haddii ay Milan doonayso inay bixiso £7m. Madx wayne ku xigeenka Milan Adriano Galliani ayaa shalay cadeeyay inay Chelsea wada hadalo kula jiraan taas oo la xidhiidh Torres.
Adriano Galliani ayaa yidhi: : ‘Hadafkayagu waa inaanu helno weerar yahan fiican, ma waxaad I waydiinaysaan Torres? Torres waa weerar yahan fiican, aan eegno inuu halkan yimaado iyo in cidkale timaado.Arintaas xoog ayaan uga shaqaynaynaa”.
Galliani ayaa sidoo kale ku kalsoon inay la soo wareegidoonaan Van Ginkel balse laacibkan ree Netherlands ayaa doonaya inuu ku sii nagaado kooxdiisa Chelsea”.
Paul Scholes Oo Ka Walwalsan Xaalada Kooxdiisii Hore Ee Man United
Xidigii hore ee khadka dhexe ee kooxda Man united Paul Scholes ayaa ka walwalsan xaalada ay ku jirto kooxdiisii hore ee Man united.Scholes ayaa aaminsan in shaxda Van Gaal uu wato ay waqti dheer ku qaadan doonto in Man united la qabsato.
United oo xili ciyaareedkii hore masiibo u ahaa ayaa kan cusubna ugu bilaamay mid ka sii daran. United ayay guuldaro ka soo gaadhay kooxda Swansea City furitaankii horyaalka, waxayna barbaro la gashay Sunderland, waxaana niyada ka sii dishay xasuuqii kooxda yar ee MK Dons oo 4:0 kaga cidhib tirtay Capital One Cupka.
Scholse ayaa arintan kaga hadlay boga The Independent oo uu wax ku qoro, wuxuuna sheegay in dhibaatadii ugu waynayd kooxdiisa soo wajahayso. Scholes ayaa aaminsan inaysan saddex difaac ahi shaqaynayn,isagoo intaa ku daray in hadda ay fududahay in Man united goolal laga dhaliyaa.
Scholes ayaa yidhi: “Waxaan fahansanahay in Van Gaal isku dayaayo inuu sameeyo isbadalo badan kuwaas oo uu doonayo inay degdeg u dhacaan,laakiin dhibaatadu waa in aysan wali ciyaartoydu la qabsan shaxda 3-5-2.”
“Waligeedba ma sahlana inaad waqti yar oo kooban ku samayso isbadal dhinaca khidada ah, adigoo waliba isbadal ku samaynaya ciyaartoy afar difaac ah sanado badan ku soo ciyaaraysay. Tan micnaheedu maaha inay shaxda Van Gaal ee 3-5-2 ay qaldan tahay, isbadalku gabi ahaanba maaha shay xun waana in ciyaartoydu aamintaa shaxda macalinkooda”. Scholes ayaa intaa raaciyay inaysan Van Gaal cudurdaar u noqon karin inuu yidhaahdo kulankii MK Dons lineup xoogan ku maan galin.
Wararkii Ugu Danbeeyay Iyo Suuqa Kala IIbsiga Ciyaartoyda
Salaamu Calaykum dhamman akhridta yaasha sharafta iyo xushmada naga mudhan ee hawada nagala socdaw, waa markale iyo barnaamijkeenii waxyaabaha ay wargaysyadu ka qoreen suuqa kala iibsiga ciyaartoyda. Waxaan ka war haynaa in uu dhawaan soo gabagaboobi doono suuqu, waxayna kooxuhu isku diyaarinayaan sidii ay uga faa’iidaysan lahayeen maalmaha kooban ee suuqu furan yahay. wixii war ah ee suuqa ka soo kordha isla qormadan dhexdeeda ayaan idiinku soo gudbindoonaa insha alaah.
Aaan ku bilawno wararka ugu danbeeyay ee Suuqa Kala iibsiga Ciyaartoyda:
Kadib markii ay Real Madrid iska iibisay Di Maria ayay hadda ku soo biirtay tartanka loogu jiro saxiixa Marco Reus. Atletico Madrid, Barcelona, Bayern Munich, Arsenal, Man united iyo Liverpool ayaa dhamaantood lala xidhiidhinayay inaydoona yaan xidiga kooxda Dortmund ee Reus./AS
Tababarha Barcelona Luis Enrique ayaa la sheegay inuusan doonayn saxiixa Juan Guadrado oo u ciyaara kooxda Fiorentina. Warkan ayaa farxad u noqon doona kooxda dhibaatadu haysato ee Man united oo hore loola xidhiidhinayay laacibkan ree Colombia./ Mundo Deportivo
Kadib dhaawaca waqtiga dheer ee soo gaadhay Giroud, ayuu Arsene Wenger liiska weerar yahanada uu doonayo ugu horaysiiyay weerar yahanka kooxda QPR ee Loic Remy. Giroud ayaa la filayaa inuu soo laban doono sanadka cusub isagoo garoomada ka maqnaandoona inta ka hadhay sanadkan. Dhinaca kale Wenger ayaa £50 million oo gini ku doonaya weerar yahanka kooxda PSG ee Edinson Cavani. / The Guardian/ Daily Express
Xidiga kooxda Newcastle United ee Ben Arfa ayaa sheegay inuu ku sii nagaan doono kooxdiisa inkasta oo uu ku jiro kursiga kaydka ee kooxdiisa. Ben Arfa ayaa lagu eedeeyay inuu miisaankiisa dhimi waayay waxaana dhibta ugu wan cayilaada ku sii kordhaysa./ Newcastle Evening Chronicle
Kooxda AC Milan ayaa kala dooranaysa weerar yahanada Torres iyo Borini . Milan ayaa suuqa ugu jirta badalkii Mario Balotelli oo todobaadkan ku biiray Liverpool.Milan ayaa doonaysa in Toress uu marka hore mushaarkiisa dhimo./ Gazzetta dello Sport
Kadib markii ay isku hubsatay saxiixa Di Maria ayay Man united doonaysaa inay dareenkeeda oo dhan ku jeediso xidiga khadka dhexe ee kooxda Juventus Arturo Vidal oo ay xagaaga oo dhan daba socotay. United ayaa Vidal hadda ku doonaysa lacag dhan €42 million. Juventus ayaa dhankeeda Man united ka doonaysa Javier Hernandez kaas oo laga yaabo inuu qayb ka noqon karo saxiixa Vidal ee United./ Gazzetta dello Sport
Napoli oo hore heshiis ula gaadhay burburiyaha dhexda ee kooxda Liverpool Lucas Leiva ayaa haddana doonaysa inay Tottenham na kala soo wareegto Sandro./ Gazzetta dello Sport
Arsenal ayaa doonaysa inay bilaash kula soo wareegto weerar yahankii hore ee kooxda Birmingham City Nikola Zigic, wuxuuna ka mid ayahay liis weerar yahano ah oo ay Arsenal doonayso inay buuxiyaan booska uu Giroud ka dhaawac may./ www.zurnal.rs
Man united ayaa doonaysay inay si aan la filayn ula soo wareegto xidiga khadka dhexe ee kooxda Liverpool Joe Allen. Van Gaal ayaa doonaya inuu Allen kula soo wareego £20m. balse ma cada in ay suurto gal noqon karto in Liverpool aqbali karto dalab uga yimimaada Man united. United iyo Liverpool oo ay colaad wayni ka dhaxayso ayaan kala iibsan ciyaartoyda/ Starsport
Kooxaha Barcelona iyo Sao Paulo ayaa ka heshiiyay iibka Douglas, waxayna ku heshiiyeen in Barcelona ka bixiso lacag dhan €5.5 million. Kooxdan Sao Paulo ayaa todobaadkii hore sheegtay in Douglas uu ku sii jeedo Camp Nou, waxaana la filayaa in Barcelona ay saxiixa Douglas ku dhawaaqi doonto 24 ka saacadood ee inagu soo aadan.War qoraal ah oo lagu daabacay websiteka rasmiga ah ee kooxda Barcelona ayaa lagu sheegay sidan: “ Kooxda Barcelona iyo kooxda Sao Paulo ayaa isla gaadhay heshiis mabda’iyan ah kaas oo la xidhiidha iibka Douglas Pereira.Lacagta ku baxaysa iibka Douglas ayaa ah €4 million iyo waliba €1.5m ku xidhan inta kulan ee uu kooxda Barcelona u ciyaaro”.
Tababaraha Besiktas: Ciyaartoyda Kooxdaydu Hadda Kama Cabsanayaan Arsenal
Tababaraha kooxda Besiktas ee Bilic ayaa sheegay inaysan hadda ciyaartoyda kooxdiisu ka cabsanayn kooxda Arsenal.Bilic ayaa aaminsan in hadda ciyaartoydiisu ay isku kalsoon yihiin, wuxuuna intaa ku daray inay ku riyoonayaan inay Arsenal garaacaan.
Besiktas iyo Arsenal ayaa lugtii hore ee is reeb reebka Champions Leaquega barbaro gool la’aan ah isla galay.Bilic ayaa ka qooma mooday inaysan ciyaartoydiisu ka faa’iidaysan fursadihii badnaa ee kulankii hore.
Bilic ayaa yidhi: “Waxaanu kulankii lugtii hore soo ban dhiganay ciyaar wanaagsan, waxaananu u ciyaarnay si fiican.waxaanu samaynay fursado iyaguna waxay sameeyeen fursado. Gabi ahaanba kumaanu farax sanayn natiijada ciyaarta, waxaan filayaa inaanu u qalanay guul aanu ka gaadhno Arsenal. Laakiin kulankan waxaanu la tagaynaa kalsooni buuxda”.
” Aniga iyo shaqaalahaygu waanu ku kalsoonayn ka hor ciyaartii hore, laakiin qaar ka mid ah ciyaartoydayada ayuu taas shaki kaga jiray sababtoo ah waligood lamay ciyaaarin kooxaha waa wayn, laakiin ciyaarta kadib aad ayay kalsooni u heleen”.
” Arsenal ayaa hadda ugu cad cad ee anagu uguma cad cadin, iyagu waa Arsenal laakiin anaguna riyo iyo rajo ayaanu lee nahay”.
Barcelona Iyo Sao Paulo Oo Ka Heshiiyay Iibka Douglas
Kooxaha Barcelona iyo Sao Paulo ayaa ka heshiiyay iibka Douglas, waxayna ku heshiiyeen in Barcelona ka bixiso lacag dhan €5.5 million. Kooxdan Sao Paulo ayaa todobaadkii hore sheegtay in Douglas uu ku sii jeedo Camp Nou, waxaana la filayaa in Barcelona ay saxiixa Douglas ku dhawaaqi doonto 24 ka saacadood ee inagu soo aadan.
War qoraal ah oo lagu daabacay websiteka rasmiga ah ee kooxda Barcelona ayaa lagu sheegay sidan: “ Kooxda Barcelona iyo kooxda Sao Paulo ayaa isla gaadhay heshiis mabda’iyan ah kaas oo la xidhiidha iibka Douglas Pereira.Lacagta ku baxaysa iibka Douglas ayaa ah €4 million iyo waliba €1.5m ku xidhan inta kulan ee uu kooxda Barcelona u ciyaaro”.
“Todobaadkan ayuu Douglas u safridoonaa Barcelona si uu tijaabada caafimaadka ugu maro, wuxuuna heshiiska u saxiixidoonaa Barcelona isagoo qalinka ku duugi doona heshiis shan sano ah”.
Madax waynaha Sao Paulo Carlos Migue Aidar ayaa qirtay inuu ka murugaysan yahay waayitaanka Douglas wuxuuna sheegay in heshiiskiisa ay adkaysay gacanta saddexaad ee qaybta ka ah lahaanshaha Douglas.
Carlos Migue Aidar oo arintaa ka halay ayaa yidhi: “Waqtigani maaha waqti farxadeed, waayo waxaan luminaynaa mid ka mid ah ciyaartoyda kooxda kowaad, laakiin hadda wuxuu awoodi doonaa inuu ka ciyaaro Champions Leaquega. Farxad ayaan ciyaartoyga u rajaynaynaa, wuxuuna Spain ku qaadan doonaa waqti fiican ”.
Waa Maxay Sababta Uu Mario Balotelli Markasta U Doorto No.45 Ka?
Tan iyo markii la arkay Mario Balotelli oo garoomada Yurub ka ciyaaraya ayaa lagu xasuustaa namberka caanka uu ku yahay ee No.45. Waxaana lays waydiiyaa sababta uu u dooran waayay nambarada ay ciyaartoyda ay isku booska yihiin jecel yihiin.
Mario Balotelli oo shalay dhamaystiray saxiixa uu ugu biirayt Liverpool ayaa markale doortay funaanadii No.45. Balotelli ayaa sheegay in No.45 iyo booska uu ka ciyaaraa ay is waafaqsan yihiin. Mario ayaa ku kaftamay in marka laysku geeyo labada tiro ee uu namberkiisu ka kooban yahay noqonaayo No.9 taas oo ah booskiisa caadiga ah.
Balotelli ayaa N.45 u soo xidhay kooxaha Inter Milan, AC Milan, Man City iyo hadda oo uu liverpool u xidhan doono. Balotelli oo u waramayay websiteka rasmiga ah ee Liverpool ayaa yidhi: “Markii ugu horaysay ee aan u ciyaaray kooxda Inter Milan, aad ayaan u yaraa, waxaana la isiiyay No.45 ka sababtoo ah da’yarka waxaa la siiyaa nambarada u dhexeeya 36-50. Waxaan doortay No.45, waxaanan ku kaftamay in marka laysku geeyo labada tiro ee nambarkayga ay noqonayso booska nambarka booska aan ka ciyaaro. Tusaale ahaan 4+5= No.9. Afartii kulan ee iigu horaysayba goolal ayaan dhaliyay”.
Man City Oo Guuldaro Iyo Dhaawacyo Iskugu Soo Dartay Liverpool
Kooxda difaacanaysa horyaalka Igiriiska ee Man City ayaa gurigeeda ku soo dubatay kooxda Liverpool oo gurigeeda Etihad Stadium marti ugu ahayd. laba gool oo uu dhaliyay Steven Jovetic iyo gool ka yimid Kun Aguero oo ciyaarta badal ku soo galay ayay City guushu ku raacday. Ciyaarta ayaa ku soo dhamaatay 3:1 ay City ugu awood sheegatay Liverpool.
Kulankan dhex maray Manchester City iyo Liverpool ayaa ahaa mid aad u adag waxayna inta badan ee qaytii hore ee ciyaarta ay ladan kooxood ku dagaalamayeen khadka dhexe.Liverpool ayaa dhawr jeer halis galisay goolka City qaybtii hore ee ciyaarta waxaana xusuus mudan in daqiiqadii 33 aad uu Sturridge kooxdiisa hogaanka u dhiibi gaadhay balse Hart ayaa kooxdiisa fursadaa ka badbaadiyay.
Daqiiqadii 41 aad ayuu Jovetic kooxdiisa Man City hogaanka u dhiibay, waxaana qaybtii hore ee ciyaarta lagu kala nastay City oo hogaanka ku ahyso 1:0. Qaybtii hore ee ciyaarta ayay liverpool u muuqatay inay ku gacan saraysay balse goolka looga hor maray ayaa niyad jab ku noqday. Liverpool ayaa laga dareemayay weerar la’aan waxaana hadda muuqata in aysan Suarez la’aan tii sidii xili ciyaareedkii hore ahaan doonin.
Markii layskugu soo laabtay qaybtii danbe ee ciyaarta ayay Man City la soo gashay dardar ka daran tii hore waxayna culays badan saartay difaaca kooxda Liverpool. Jovetic ayaa markale kooxdiisa hogaanka u sii dheereeyay isagoo goolka labaad u dhaliyay daqiiqadii 55 aad ee qaybtii danbe ee ciyaarta. Intaa ka dib ayay Liverpool u muuqatay in ay kalsoonidii ka luntay wuxuuna Pellegrini ciyaarta badal ku soo galiyay Sergio Aguero kaas oo lagu soo badalay Edin Dzeko. Dzeko ayaa dhawac ku baxay waxaana booskiisii buuxiyay Agureo. Aguero oo aan daqiiqad ciyaarta ku jirin ayaa City u dhaliyay goolka kalsoonida halka uu liverpool na kaga ahaa midka kala daadiyay ee niyada ka dilay. Ciyaarta ayaa noqotay 3:0 ay City ku raaxaysanayso.
Liverpool ayaa daqiiqadii 84 aad heshay goolkeedii kowaad. Sturridge ayaa kubbad qurux madan madax u soo saaray Lambert oo ciyaarta badal ku soo galay. Lambert ayaa Pablo Zabaleta ku sababay inuu goolkaas iska dhaliyo.
Intaa ka dib ayay liverpool dhibaato hor lihi ku habsatay waxaana ka dhaawac may Johnson, Skrtel iyo Alberto Moreno. Dhaawac yadan ayaa yimid waqti uu Rodgers dhamaystay saddexdii badal ee sharciga ahaa waxayna liverpool ciyaarta ku dhamaysatay 8 ciyaartoy. inkasta oo uu Moreno ciyaarta iskaga sii jiray balse wax dhaq dhaqaa ah ama difaac ah muu samayn karayn. Ciyaarta ayaa ku soo dhamaatay City oo ku badisay 3:1.
Real Madrid Oo Guul Ku Furatay Horyaalka Xili Ay Guul Ka Gaadhay Cordoba
Kooxda Real Madrid ayaa horyaalka spain ku bilaabatay guul ay ka gaadhay kooxda heerka labaad ka soo baxday ee Cordoba. laba gool oo ay Real Madrid u kala dhaliyeen Krim Benzema iyo Cristiano Ronaldo ayay Real Madrid Gurigeeeda saddexda dhibcood kaga reebatay kooxda Cordoba.
Labada kooxood ayaa ku soo kala galay line-upyada iyo shaxahan:
Real Madrid:(4-2-3-1): Casillas; Arbeloa, Ramos, Pepe, Marcelo; Kroos, Modric, James; Ronaldo, Benzema, Bale
Cordoba:(4-4-2): Juan Carlos; Gunino, Inigo, Pantic, Crespo; Rossi, Garai, Pinillos, Lopez Silva; Ryder, Mike
Real Madrid ayaa ciyaarta dardar ku soo gashay iyadoo taageero laxaadleh ka helaysa jamaahiirteeda soo buux dhaafiyay garoonkeeda Santiago Bernabeu. Karim Benzema ayaa kooxdiisa hogaanka u dhiibay daqiiqadii 30 aad ee qaybtii hore ee ciyaarta, goolkaas oo uu caawiye ka ahaa saxiixa cusub ee Toni Kroos. Koorne uu Kroos soo laaday ayuu Benzema kooxdiisa madax ugu dhaliyay.
Kooxda Cordoba ayaa soo bandhigtay difaac fiican oo ay iskaga difaacday weerarka xad dhaafka ah ee kooxda Real Madrid waxaana qaybtii hore ee ciyaarta lagu kala nastay Real Madrid oo ku hogaaminaysa 1:0
Markii laysku soo nastay ee koox kastaaba la soo tashatay tababaraheda ayaa dib laysku soo laabtay. kooxda martida hayd ee Cordoba ayaa isku dayday inay la timaado goolka bar bar dhaca , waxayna dhawr jeer halis galisay goolka Real Madrid. daqiiqadii 72 ayaa Cordoba laga diiday gool. Fidel ayaa goolkaas dhaliyay balse markii danbe ayaa la ogaadhay inuu hormasaarto ahaa.Real Madrid ayaa ku dadaalaysay inay goolkeeda labaad la timaado balse difaac Cordoba oo habaysnaa awgeed ayaa keentay inaysan Real Madrid sidii la filanaayay goolal badan ka dhalinin kooxdan heerka labaad ka soo baxday.
Ugu danbayn Real Madrid ayaa goolkeeda labaad la timid daqiiqadii 90 aad ee dhamaadkii ciyaarta waxaana Real Madrid hogaanka u dheereeyay gool dhaliyaheeda Cristiano Ronaldo. Waxaa gacanta caawinta iska lahaa Isco. Ciyaarta ayaa ku soo dhamaatay 2:0 ay Real Madrid ku guulaysatay.